Ukukhethwa kwezindaba zokuhlela zikaJuni | Izincwadi Zamanje
Juni, inyanga entsha nokufundwa okusha okuhlukahlukene okuzosiyisa eholidini elilandelayo. Ezihlokweni ezahlukahlukene, lokhu kungokwami ukukhethwa kwezihloko eziyi-6 wezincwadi zomlando, ezimnyama, eziyimfihlakalo nezesabekayo nokubuyekezwa okuqanjiwe kwaleyo nkanyezi yamafilimu yakudala nowesifazane ohlakaniphile owayenguHedy Lamarr.
1 Amasimu enkazimulo - uPedro Santamaría
2 Isibikezelo - Rosa Blasco
3 Ngemuva - uStephen King
4 Abaphilisi - u-Emanuela Valentina
5 Phakathi kobusuku - uMikel Santiago
6 Inkanuko Engaphelele - URoberto Lapid
Amasimu enkazimulo - UPedro Santamaría
UPedro Santamaría wethula inoveli entsha lapho eyokugcina isanda kwenzeka, Isaka laseRoma. Kusibuyisela emuva e-Antiquity ukusitshela enye indaba esethwe ngonyaka 450d. C. AmaHuns we Attila kaninginingi baye banqoba futhi bahlula uMbuso WaseMpumalanga WaseRoma, osevele ubenzela umusa futhi ubahlonipha.
UFlavio AecioJikelele wamasosha aseNtshonalanga, kuyacaca ukuthi kungekudala kuzoba ithuba labo. Ngaphezu kwalokho, isifundazwe esinothile sase-Afrika siwele ezandleni zamaVandali, amaSwabiya namaBagauda I-Spain futhi amaGoth asungule umbuso omncane ozungeze iToulouse. Ukukubeka phezulu, eRavenna, lapho inkantolo yombuso wababuthakathaka ikhona UValentinian III kuyisidleke sokwakhelwa uzungu nokukhashelwa. Ngakho-ke u-Aetius uyazi ukuthi uma kunethuba lokulondoloza okusele eRoma, kuzofanele enze isivumelwano nababeyizitha zakhe, i Amagothothi kaTheodored, ukubhekana nenqwaba ka-Attila.
Isibikezelo - URosa Blasco
URosa Blasco uvela eTeruel wase-Alcañiz, yize esebenza njengodokotela womndeni eTudela, umsebenzi awuhlanganisa nezincwadi. Ubhalile Isibhedlela iProvence y Igazi elingalungile. Futhi manje wethula le ndaba entsha ngama-protagonists amabili, i-forensic USimonetta brey nokhomishani UDario Ferrer, okuzofanele aphenye amacala abanye wabulala odokotela eMenorca.
Ngemuva - UStephen King
Zingaba yini lezi zinsuku ngaphandle kwencwadi ye- Stephen King? Ngakho-ke kuyahamba lesi sihloko sompteenth ukuthi izinkanyezi UJamie conklin, okuwukuphela kwengane kamama ongayedwa, ofuna nje ukuba nobuntwana obujwayelekile. Kepha kuvela ukuthi wazalwa ene- amandla angaphezu kwawemvelo lokho kukuvumela ukuthi ubone okungekho muntu futhi uthole nokuthi yini umhlaba wonke ongakwazi. Ngokusebenzisana nomhloli ovela eMnyangweni Wamaphoyisa waseNew York, okuphoqa ukuthi ugweme i- ukuhlaselwa kwakamuva kwababulali esabisa ngokuhlasela ngisho ethuneni, uJamie kungadingeka akhokhe inani elinzima lalawo mandla.
Izinyanga - U-Emanuela Valentina
Nathi sinalokhu Thriller isethwe enyakatho yase-Italy. Sise-2019 edolobheni elincane elisezintabeni elihlangana ukukhala ngokulahlekelwa yintombazane eyatholwa ngamathambo ehlathini, ngemuva kweminyaka engamashumi amabili nambili inyamalele. Kufika kuye USara romani, i-oncologist ephumelelayo yokuhlinza, owayengabuyanga kusukela ebuntwaneni bakhe futhi manje uhlangana nesikhathi esedlule lapho eqe khona. Kodwa ke anyamalale kufone enye intombazane Rebecca, oyindlalifa yokugcina yenkambiso yasendulo yabelaphi. Futhi uSara kuzofanele ashiye ingqondo yakhe yokuhlaziya ngemuva ukuze athole ukuthi bekungenzekani.
Phakathi kobusuku - UMikel Santiago
UMikel Santiago buyela ku ILumbe, idolobha elicabangayo leBasque Country lapho ayesevele ehlele khona inoveli yakhe yangaphambilini, Umqambimanga. Manje kusibuyisela emuva eminyakeni engamashumi ayisishiyagalolunye, kubusuku bekhonsathi yedwala lapho intombazane yanyamalala khona. Ngalobo busuku futhi kwaba ukuphela kweqembu neqembu labangane kusuka UDiego Letamendia, eyodwa inkanyezi yedwala ukwenqaba ukuthi ngubani, ngemuva kwalokho, oshiye futhi waqala umsebenzi ophumelelayo wedwa. Amaphoyisa awakaze akwaze ukuthola ukuthi kwenzekeni I-Lorea, intombazane elahlekile nentombi kaDiego, abebeshiye ikhonsathi ngokushesha okukhulu.
Kakade njengamanje, futhi sazi ukuthi elinye lamalungu eqembu lifa ku- umlilo ongajwayelekile, UDiego uzothatha isinqumo sokubuyela e-Illumbe. Ukuhlangana kabusha nabangane bakudala kuzoba nzima futhi, ngaphezu kwalokho, manje kusolwa ukuthi lo mlilo mhlawumbe awuzange ube ngengozi.
Uthando olungaphelele - URoberto Lapid
Umbhali wase-Argentina uRoberto Lapid wethula le noveli ngokususelwa kwizigameko zangempela ngempilo ka Hedy LaMarr, hhayi umdlali waseshashalazini nenkanyezi, kepha owesifazane omuhle futhi okhaliphile, osemqoka emlandweni wekhulu lama-XNUMX. Ngaphezu komsebenzi wakhe wefilimu, wafundela ubunjiniyela futhi wasungula futhi wanelungelo lobunikazi a uhlelo lokuxhumana ukuqondisa kude ama-torpedoes nokuqinisekisa oxhumana nabo phakathi kwabasizi phakathi nempi. Kungenxa yalobu buchwepheshe lapho uhlelo esilusebenzisayo namhlanje kumakhalekhukhwini, i-Wi-Fi, i-Bluetooth ne-GPS lusekelwe.
Ngakho sinakho UFriedrich Mandl, insizwa yase-Austrian ethatha ifektri kayise yezikhali ebhujisiwe futhi eminyakeni eyishumi nje iyakwazi ukwenza omunye wemali enkulu kunazo zonke eYurophu. Kepha ngibona umlingisi UHedwig Kiesler kumamuvi uthandana naye futhi bayashada. Kodwa-ke, lapho ubudlelwane buba buthaka ngenxa yomona nokungathembeki, umvalela enqabeni yakhe eSalzburg.
UHedy uzokwazi ukuphunyuka futhi bayobaleka kulo lonke elaseYurophu. Kusemkhunjini wolwandle obheke eNew York lapho ahlangana khona ULouis B. Meyer, umongameli weMetro Goldwyn Meyer, omqasha ngokushesha amenze uHedy Lamarr.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Amabhuku » Ukukhethwa kwezindaba zokuhlela zikaJuni